Fikambananny Firenena any Azia Atsimo-Atsinanana
Ny fotoana andalovan ny masoandro ao amin ny fari-danitry ny antokon-kintana Mizana dia amin ny 31 Oktobra hatramin ny 22 Novambra. Ny fari-potoan ny Mizana araka ny zôdiakan-kintana dia eo amin ny 16 Oktobra hatramin ny 15 Novambra. Ny Mizana ao ...
Ny fotoana andalovan ny masoandro eo amin ny antokon-kintanny Virijiny dia manomboka amin ny 16 Septambra ka miafara amin ny 30 Oktobra. Ny fari-potoan ny Virijiny araka ny zôdiakan-kintana frantsay: zodiaque sideral dia hatramin ny 16 Septambra ...
Ny Bibilava dia antokon-kintanny zôdiaka andalovanny masoandro aminny 29 Novambra hatraminny 18 Desambra. Ny antokon-kintanny Maingoka no eo andrefany fa ny anny Mpitifitra Tsipìka kosa no eo antsinanany. Tsy misy ny evanny zodiaka mitovy anarana ...
Ny fotoana andalovan ny masoandro ao amin ny fari-danitry ny antokon-kintanny Ombilahy dia amin ny 13 Mey hatramin ny 21 Jona. Ny fari-potoan ny Ombilahy araka ny zôdiakan-kintana dia eo amin ny 16 Mey hatramin ny 15 Jona. Ny Ombilahy ao amin ny ...
Ny Liona na Alahasaty no vintana fahadimy amin ny fanandroana manaraka ny zôdiaka. Ny Foza na Asorotany no eo alohany ary ny Virijiny na Asombola no manaraka azy.
Hira 4 Manàna Laza Tsara eo Anatrehan’Andriamanitra 1. Ampiasao tsara Ny andro iainanao. Ho tsara laza, Ho mendrika ianao. Miezaha ho marina, Ho faly Jehovah. Hotahiny ianao, Ho sambatra. 2. Mandalo ihany ’Zao fiainana izao, Ka zava-poana Raha te ...
Ny Salamo voalohany na Salamo 1 dia salamo ao aminny Baiboly izay manokatra ny Bokinny Salamo. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
Ny Salamo faharoa na Salamo 2 dia salamo ao aminny Baiboly, ao aminny Bokinny Salamo. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
Ny premilenarisma dia iray aminireo endriky ny milenarisma kristiana izay ampianarana sady mampino fa ny fiaviani Jesoa Kristy fanindroany dia hitranga alohanny fotoana hanjakani Jesosy Kristy mandritra ny arivo taona ara-bakiteny eto an-tany. Iz ...
Ny Fahendreni Salomona na Bokinny Fahendrena dia boky ao aminny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa izay voasokajy ao aminireo boky deoterokanonika. Mamaly ny fahendrena ivelanny fivavahana jiosy, indrindra fa ny filozofia grika, ity boky it ...
Ny postmilenarisma dia fampianarana sy finoana ny fiaviani Jesosy Kristy fanindroany eto an-tany aorianny arivo taona. Iray aminireo endrika roanny milenarisma kristiana ny postmilenarisma nefa vitsy ny mpanaraka azy. Ny firehana faharoa be mpana ...
Ny amilenarisma dia fampianarana izay manambara fa tsy ara-bakiteny ny arivo taona hanjakani Jesosy Kristy eto antany aminny fiaviany fanindroany. Ny fanjakana arivo taona dia ampitovizinny amilenarista aminny fanjakana mandrakizay, araka izay hi ...
Ny arivo taona na fanjakana arivo taona dia ilazana ny faharetanny fanjakani Jesosy Kristy eto an-tany aorianny niakarany any an-danitra araka ny Apokalipsy ao aminny Baiboly. Izany fanjakana arivo taona izany dia resahina ao aminny toko faha-20 ...
Ny Milenarisma na Kiliasma na Milenialisma dia fampianarana na fanantenana ny fahatongavanny arivo taona izay mitondra fiadanana sy manafoana ny ratsy rehetra eto an-tany. Ny eo aminny tontolonny fivavahana no tena misy anizany nefa ahitana azy k ...
I Tômasy na Tômà dia isanireo mpianatri Jesoa roa ambinny folo lahy. Izy ilay mpianatra tsy nino ny fahafatesani Jesoa ka nila nitsapa ny lanivoany.
Ny Filazantsarani Maria na Evanjelini Maria dia soratra gnostika izay angamba nosoratana taminny taonjato faha-2. Resaka ifanaovani Maria sy ireo Apostoly no mibahan-toerana ao. Adihevitra ara-panahy iharanny firehana gnostika no hita ao. Ao amin ...
I Hara-magedona na Harmagedôna dia toerana ara-paminaniana izay voalaza ao aminny Apokalipsy ao aminny Baiboly fa hivorian’ireo tafika hiady any amin’ny andro farany. Io teny io dia midika hoe "tendrombohitr’i Megido". Ny tendrombohitra na havoan ...
Ny fiteny tsy fantatra dia fitenenana na fivavaka aminny feo mafy aminny fiteny mitovy endrika aminny fiteny vahiny, tsy fantatrilay olona miteny, na teneniny aminny fampitohizana vaninteny tsy azonny olona. Ahitana fiteny tsy fantatra ny fivavah ...
Ny Apokalipsini Noa na Apokalipsani Nôe dia boky apokrifa na pseodepigrafanny Testamenta Taloha fantatra fotsiny noho ny tsiahy hita ao aminireo asa soratra hafa mitovy karazana aminy, dia ny Bokini Henoka indindraindrindra sy ny Bokinny Jobily a ...
Mpanoratra Mpanoratra izay iray fotoana tamindry Ny Avana Ramanantoanina, Rodlish sy Rabearivelo. saingy tsy dia fantatra loatra. Ny antony dia satria maty tanora loatra izy ary tsy nanana fotoana nampahafantarana ny sanganasany. Teraka teny amin ...
Abdellah el-Kadiri Anne-Marie Albiach Philip Glass Jo-El Azara Harris Yulin Jean Charles Jean-Pierre Adam Arthur Schmidt Guennadi Goussarov Lluis Martinez Sistach Vlatko Marković Philippe Madrelle Armin Hary Christian de Chergé Tatyana Shchelkano ...
Ny tetiandro litorjikanny Fiangonana katolika siro-malabara dia noraiketina araka ny fizotran’ny tantaram-pamonjena. Amin’ny fifantohana amin’ny fiainana ara-tantaran’i Jesoa Krisy, ny mpino dia tarihina ho amin’ny fahatanterahana eskatolojika ma ...
Ny varimbazaha dia zavamaniry toy ny vary, izay volena hohanin ny olombelona sy ny biby hatry ny vannimootoana talohan ny tantara, ka ny mponina any amin ny faritra manana toetany antonony ny tena namboly azy tamin izany. Ny varimbazaha dia zavam ...
Andrianjakanavalomandimby dia andriana merina zanak Andriamasinavalona, nanapaka ny ampahany amin Imerina, izay tera-dRamananimerina. Fony mbola velona Andriamasinavalona dia izy no nifehy ireto vohitra ireto: Ambohitraina, Ambohiborona, Vakinamb ...
Ny Zanakandriana dia ireo andriana merina azo asandratra ho mpanjaka. Saika zanaka nateraky ny mpanjaka sy ny mpiray tampo amin ny mpanjaka izy ireo, ary ireo andriana tian ny mpanjaka hosokajiana ho Zanakandriana na noho ny hafa-drazana toy ny m ...
Ny menakely na vodivona dia ampahan-tany tapahin ny mpajaka nefa iadidian ny andriana votendriny, ka io andriana io no atao hoe tompomenakely na tompombodivona. Mifanohitra amin io ny menabe izay tany iadidian ny mpanjaka mivantana.
Ny topomenakely dia olona, matetika andriana, izay nitokisan ny mpanjaka ka nomeny fahefana hiadidy faritra iray atao hoe menakely izay tsy iadidian ny mpanjaka mivantana.
Ny Ariàna na Aria dia ireo Indô-iraniana. Midika hoe "andriana" io teny io ary nampiasainireo Indiana nandrotra ny vanimpotoana vedika tao India hanondroany ny tenany sy hanondroany ny saranganny andriana sy ny faritra fantatra aminny anarana hoe ...
Ny Andriantompokoindrindra dia andriana merina, taranak Andriantompokoindrindra, zanaka lahimatoan-dRalambo. Niteraka telo lahy Andriantompokoindrindra, ka ny zanany lahimatoa atao hoe Ratompoinandriana sy ny zanany faharoa Andriandambo ary ny ta ...
Ny menabe dia ampahan-tany iadidian ny mpanjaka mivantana fa tsy ankininy amin ny andriana. Mifanohitra amin io ny menakely izay tany iadidian ny andriana na dia eo ambany fanapahan ny mpanjaka aza.
Ny Zanadralambo amin Andrianjaka dia ny taranaky ny mpanjaka Ralambo tamin ny vadikeliny, iray amin ireo fizaràn ny Zanadralambo, izay sokajin andriana merina, ka ny fizaràna faharoa dia nantsoina indray hoe Zanadralambo. Misy ny Zanadralambo ami ...
Andriandambonavalona dia maro anaka ka Razakatsihono, vavimatoa, no nataony vavy lahy, hitondra fanjakana tao Sambaina. Razakatsihono dia nahazo tantara tamin’ Andrianampoinimerina. Nividy vanja sy basy ho an’ Andrianampoinimerina izy: vanja 3 ba ...
Ny tsindranolahy dia vatan-dehilahy mahatoky ny mpanjaka na ny andriana na tamin ny tanjany na tamin ny toetrany, ka nofidiny mba hiaro sy hiambina azy ary tsy misaraka aminy mihitsy amin ny toerana rehetra alehany. Misy koa ny tsindranovavy, iza ...
Rahefa niamboho Andriantsimitoviaminandriandehibe dia ny zanany lahimatoa Andrianjakatsitakatrandriana aloha no nanjaka nandimby azy tao Antananarivo fa Andrianjakanavalondralambo zandry olona dia nampanoavina teo Alasora nanaraka ilay didy fando ...
Andriambolanambo, zanak’ anabavin’ Andriamasinavalona, mpanjaka, no andriana tompom-bodivona tao Namehana, nanambady an-dRamanitrandriatsimitovy na Rasoherinareniny ka niteraka an-dRasoherimanantany, izay lasa vadin’ ny mpanjaka Andriambelomasina ...
I Tsiribihina dia onin i Madagasikara mivarina any amin ny Lakandranon i Mozambika ao amin ny vinaniny 50 km ao avaratr i Morondava. Aminny faritra sasany dia mahatratra 1 km ny sakany. Azo itondrana lakana izy hatrany aminny vozoni Bemaraha. Bet ...
Ny hasina dia ny tsiro ivahanny sira sy ny zavatra masira rehetra, ka avy aminizany ny hoe "masina" izany hoe "masirasira". Io no nahatonga ny anarana hoe ranomasina. Ka ny olona na zavatra itoeranny hasina ihany no afaka manome hasina ireo tonto ...
Ny hasina dia ny toetranny zavatra voatokana, tsy aharo aminny maro, natao ho ambony sy hajaina. Ohatra, ny loharano masina dia loharano iray eo an-tanàna izay navahana hatao fantsakana ny rano ampiasainny andriamanjaka, na loharano heverina fa i ...
Ny hazo dia fitao ôrganika, vita kira selilôzy, milona anaty lininina mahatanty tsindry. Aminny teny malagasy dia fampiasa koa ny teny hoe "kakazo" mba hilazana ny hazo. Ny hazo dia tiana aminny toetra mekanikany, ho anny hasina ara-pana ary ny r ...
I Isaaka na Isaka dia lehilahy voalaza ao aminny Baiboly ho zanaki Abrahama sy i Saraha sady rahalahy tsy iray reny aminy i Ismaela. Nanambady ani Rebeka izy ka niteraka ani Esao sy i Jakôba. Nanohy ny fivavahan-drainy amin Andriamanitra tokana i ...
Ambatofisaorana dia vohitry ny Andriamasinavalona hatramin’ ny ela, izay mbola onenan’ ny taranaka. Vohitra miorina ao avaratr’ Isadabe, amin’ ny làlana miala avy eo Talata-Volonondry, mianavaratra mahazo an’ Ambatomanoina mandalo an’ Ambohitrolo ...
Fikambananny Firenena any Azia Atsimo ..